Mba ise na-achọ ịkwụ ụgwọ n'aka Iran maka ịgbada Boeing nke Ukraine
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Mba ise na-achọ ịkwụ ụgwọ n'aka Iran maka ịgbada Boeing nke Ukraine
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Safety • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
Minista mba Canada bụ Francois-Philippe Champagne kwupụtara na Canada, Afghanistan, United Kingdom, Sweden na Ukraine na-achọ ka Iran kwụọ ha ụgwọ maka onye njem Ukraine. Boeing 737gbọ elu XNUMX gbagburu ndị agha Iran.
Dabere na onye ozi ahụ, Iran ga-enwerịrị nnabata maka ọrụ maka ụgbọ elu dara ada ma mezuo ọrụ ya maka ezinụlọ nke ndị ọdachi ahụ metụtara. Mba n’atụ anya ịkwụ ụgwọ n’oge ma dịka iwu mba ụwa siri dị.
Na mgbakwunye, Champagne kpọrọ oku maka nyocha zuru ezu na nke onwe ya na ihe ahụ merenụ.
Canada, Afghanistan, United Kingdom, Sweden na Ukraine ekepụkwala otu pụrụ iche ga-agwa ndị ikwu nke ndị a gbasara agam n’ihu nke nyocha ahụ ma tinye aka n’enyemaka ha chọrọ.
Ukraine International Airlines' Boeing Onye njem 737 gbara ndị agha mgbochi ụgbọelu Iran gbagburu na Jenụwarị 8 na Tehran. N'ihi ya, mmadụ 176 nwụrụ - ndị njem 167 na ndị ọrụ itoolu. Mgbe ọ gọnahịrị itinye aka na ọdachi ahụ ma kwuo na ụfọdụ nsogbu ọrụ dara ụgbọ elu ahụ, Iran mechara nwee nnukwu ihe akaebe na-enweghị mgbagha ma manye ya ikweta ọrụ maka ihe mere: Onye isi ndị agha nke ndị agha Iran kwuru na ha "hiere ụzọ" gbagburu otu ụgbọ elu ndị Ukraine, ka ha "kwụrụ ya" maka ụgbọ njem ụgbọ mmiri.
Hurtigruten Expedition na-ewebata nanị Galapagos ...